यसरी हुन्छन् वन्यजन्तु घाइते - Nature Khabar Complete Nature News
स्थानीय वायूको प्रभावले वर्षा
रेडपाण्डाको छाला बेच्ने पक्राउ
सौराहामा वन्यजन्तुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला समापन
नरेश शर्मा विज्ञ समूहको अध्यक्ष
यती एअरलाईन्स शून्य कार्बनको यात्रा गर्दै
गाईभैसीको सडकमा कन्त विजोग
मुस्ताङ्मा स्याउ उत्पादन बढ्दै
किसानले उत्पादन गरेको दैनिक ५० हजार लिटर दूध खेर
खाद्य स्वच्छता दिवसमा विविध कार्यक्रम हुँदै
हेफर मोडेलमा कृषि योजना बनाउन सुझाव
संघीय संरचनामा एकिकृति कृषि नीतिको आवश्यक
कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने
भारततर्फ तस्करी गरी लैजान लागिएको गाई, बाछाबाछी नियन्त्रणमा
चितवनमा केराको बोट फाँडेको आरोपमा पक्राउ
असिनापानीले लाखौँको क्षति
यसरी चिनौँ गुणैगुणको धनी भीमकाय हात्तीलाई
मन्त्रीले भने,’ वातावरण संरक्षण गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माण गरौँ ’
जैविक विविधता सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम
जैविक विविधताबाटै धनी बन्न सकिन्छ : बस्नेत
११४ वटा प्रकृतिका मुद्दा दायर
विश्व वन्यजन्तुु कोषको रजत महोत्सव
संरक्षण व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्ने : वन मन्त्री
गैरीशंकरमा मृगको उद्धार
काभ्रेपलाञ्चोकको गुर्दुमडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङको उडान
प्रदेश ७ – पर्यटनका चुनौती र सम्भावना
रारा तालबाट देशबासीको नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
बालअधिकारका लागि सगरमाथा आरोहण गर्दै
इलाममा चैत २९ देखि सूर्योदय सडक महोत्सव
रारा तालबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
चितवन निकुञ्जमा पर्यटक बढे
ओलीले भने-इमान्दार हुनुस् बहानाबाजी होइन
वन तथा वातावरणमा डा. ओली
बुधवार खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने
‘रोबर्टले मानिसका सबै जागिरहरू कब्जा गर्दैनन ‘
विकास र पुनर्निर्माण
भूकम्प गएको चार वर्षपछि सञ्चालनमा सिन्धुपाल्चोकको कारागार
रोल्पा बन्यो देशकै पहिलो हरित वडा
लामो दूरीमा चल्ने गाडी बन्द
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन समितिको सभापतिमा छनौट
भूकम्प प्रभावित दोलखा जिल्लामा २० जनालाई छात्रवृत्ति
आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अवसर : प्रधानमन्त्री
मेलम्ची: सबैभन्दा लामो सुरुङ छिचोल्ने काम पूरा
तातोपानी नाका ‘छिट्टै खुल्ने’ नेपालको आशा
यसरी हुन्छन् वन्यजन्तु घाइते
‘मानव सिर्जित समस्याका कारण वन्यजन्तु घुमफिर गर्दा बढी घाइते हुने गरेका छन् ।’
२०७२ साल फागुनमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७ वर्षको पोथी चित्तल बच्चासहित पानी खान सिक्टा सिंचाइको नहरमा पस्यो । नहरबाट बाहिर आउन नसक्दा खुट्टामा चोट लाग्यो र घाइते भयो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०७२ साल चैत २३ गते दश वर्षको गैंडाको पछाडि पट्टीको भागमा रगत बगिरहेको अवस्थामा हलखोरिया क्षेत्रमा भेटियो ।
बाँके निकुञ्जमै त्यही वर्ष माघ २० गते एक वर्षको पोथी बंदेल घरपालुवा कुकुरको आक्रमणले घाइते भयो । उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो प्राविधिकहरुले बचाउन सकेनन् ।
२०७२ साल फागुनमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पोथी रतुवा तारमा अल्झिएर घाइते अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फेला परेको थियो ।
देशका धेरै निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरूमा यसै गरी वन्यजन्तु घाइते हुने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्रै ६४ वन्यजन्तुको घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये धेरै बदेल र अरू साना जनावर भेटिन्छन् । कतिपयको उपचार अभावमा मृत्यु हुन्छ भने समयमै भेटिएर बचेका उदाहरण पनि छन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३८ वटा जनावर घाइते भएका थिए । जसमा ३० वटा चित्तल ३ वटा निर बिरालो, जङ्गली हात्ती, ठुलो धनेश, गैंडा र वन बिरालो लगायतका जनावर रहेका छन् ।
तर सरकारले वन्यजन्तुमैत्री विकास नीतिमा ध्यान नदिदा वन्यजन्तु घाइते हुने र मर्ने क्रम बढिरहेको छ । बाटो बनाउदा वा अन्य विकासका काम गर्दा वन्यजन्तुमैत्री बनाउनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता नारायण रुपाखेतीका अनुसार, पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौडा-पथ्लैया र पथ्लैया-निजगढ सडक खण्डको बिचमा फैलिएको निकुञ्जमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्दा धेरै घाइते हुने गरेका छन् । उनले भने , ‘मानव सिर्जित समस्याका कारण वन्यजन्तु घुमफिर गर्दा बढी घाइते हुने गरेका छन् ।’
शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ वटा वन्यजन्तु घाइते भएका छन् । जसमध्ये एउटा नाउर र एउटा चरी बाघ रहेको छ । यसै गरी शुक्लाफाँटामा चारवटा वन्यजन्तु घाइते भएका छन् । जसमध्य दुईवटा अजिङ्गर, दुई चित्तल घाइते भएका छन् ।
त्यस्तै शिवपूरी नागर्जुनमा चारवटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये तिन वटा चितुवाको र एक रतुवा घाइते भएको छ । यसै गरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज १० वटा वन्यजन्तु घाइते भएका छन् । जसमध्ये ८ वटा चितल , एक रतुवा र एक चितुवा रहेका छन् ।
कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा एक रतुवा घाइते भएको छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा एक ब्वांसो घाइते भएको छ । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज दुई वन्यजन्तु घाइते भएका छन् । त्यस्तै गैरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा एक रतुवा घाइते भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निुकञ्जमा एउटा अजिङ्गर घाइते भएको छ ।
सामान्य घाइतेलाई उपचार गरेरे निकुञ्जमा छोड्ने काम त्यहीको भेटनरी डाक्टरले गर्ने गरेका छन् । गम्भीर घाइतेलाई पहुँच भएसम्म सदर चिडियाखानामा उपचारका लागि पठाइन्छ ।
तराईलाई केन्द्रित गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सौराहमा वन्यजन्तु अस्तपताल बन्दै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रणि उद्यान भक्तपुरमा वन्यजन्तु उपचारको लागि पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
बिरामीको शरीरको दाहिने भाग नचल्दा…
जेठ ०५, २०७५
जेठ ०७, २०७५
समृद्धिका लागि जैविक विविधता डा. ओली
जेठ ०८, २०७५
सरकारको प्राथमिकतामा वन र वातावरण